Desktops - Linux Vanopindwa muropa | Linux Vakapindwa muropa (Peji 2)
Yekutanga alpha vhezheni yeMaui Shell yakaburitswa
Maui Shell inogadzirisa otomatiki kuhukuru hwescreen uye nzira dziripo dzekuisa, uye inogona kushandiswa kwete chete pamasystem ...
GNOME 42 inosvika nechishandiso chitsva chekutora, kuvandudzwa kune rima dingindira uye mutsva wemavara edhita, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva.
GNOME 42 yakaburitswa zviri pamutemo, iine zvinhu zvitsva zvakaita sechidzitiro chitsva uye chinyorwa chitsva.
GNOME 41.5 iri pano sebugfix update, uye inosvika padivi peGNOME 40.9, iyo yazvino gadziriso mune ino nhevedzano.
Project GNOME yakaburitsa GNOME 41.5, inova yechishanu yekuvandudza poindi munhevedzano iyi yauya kuzogadzirisa tsikidzi.
NSCDE, iyo retro-maitiro desktop desktop
Mazuva mashoma apfuura, kutangwa kweiyo vhezheni nyowani yeNsCDE 2.1 chirongwa chakaziviswa, icho chinogadzira nharaunda yedesktop ...
GNOME 42 RC yatovepo, inogadzirira kuburitswa kweiyo yakagadzikana vhezheni ichasvika mwedzi uno
GNOME 42 RC yakatoburitswa, iyo inogadzirira kuburitswa kweiyo yakagadzikana vhezheni ichasvika pakupera kwaKurume.
Iyo nyowani vhezheni yeBudgie 10.6 yakatoburitswa
Kuburitswa kweiyo itsva Budgie 10.6 desktop vhezheni ichangobva kuziviswa, iyo yakaiswa seyekutanga vhezheni ...
GNOME 42 Beta yakaburitswa iine yakawanda GTK4 uye libadwaita. Kutonhora kwatangawo
GNOME 42 Beta yakatoburitswa. Iyo inouya nezvakawanda zvitsva maficha, asi inosimbisa kuti yakawanda software yaenda pakushandisa GTK4 uye libadwaita.
KDE Plasma 5.24 inosvika nerutsigiro rwemunwe, kuvandudzwa uye nezvimwe
Iyo nyowani yakagadzika vhezheni yeKDE Plasma 5.24 yakatoburitswa, umo shanduko dzakakosha dzakaitwa zvese ...
Plasma 5.24 beta vhezheni yave kuwanikwa kuti iongororwe uye mune iyi vhezheni nyowani mukati mekunatsiridza kwatinogona kuwana ...
15-Minute Bug Initiative inovavarira kubvisa KDE mubhagi kamwechete zvachose
Chirongwa chitsva cheKDE, chinodaidzwa kuti 15-Minute Bug Initiative, ine chinangwa chekuita kuti desktop ive isina zvachose.
GNOME 42 ikozvino inogona kuongororwa, sezvo vakaburitsa alpha vhezheni. Mazhinji ekuchinja kwayo ane hukama neGTK4 uye libadwaita.
GNOME 40.7, "inofinha" kugadzirisa kugadzirisa tsikidzi
GNOME 40.7, iyo yechinomwe yekuvandudza poindi mune ino nhevedzano, yasvika se "inofinha kusunungurwa" ine bug inogadzirisa.
GNOME: ndiani akakuona, ndiani akakuona uye ndiani anokuona [Maonero, uye zvishoma nhoroondo]
GNOME ndiyo inonyanya kushandiswa desktop munyika yeLinux, asi ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo? Ongororo yezvakapfuura, zvazvino uye zveramangwana zvepurojekiti.
Fly Pie: inoshamisa app yekuvhura yeGNOME Shell
Maapplication ekutanga eLinux desktops akasiyana anowanzo kuve ane echinyakare simba. Fly Pie inotyora zvese izvo ...
GNOME 41.2 inosvitsa mamwe magadzirirwo kudesktop nemaapuro senge software centre nekarenda
GNOME 41.2 yasvika seyechipiri yekugadziridza gadziriso mune ino nhevedzano nekuvandudzwa kwekushandisa kwayo uye graphical nharaunda.
XWayland: Nhau dzekuvandudza VR rutsigiro muLinux
Virtual chaiyo iri kuramba iripo, uye ikozvino chirongwa cheXWayland chave kuda kuunza padyo neLinux nekumwe kuvandudzwa.
Plasma Mobile Gear 21.12: Yakaburitswa nharembozha
Plasma Mobile Gear inosvika pavhezheni 21.12 iine nhau dzekuvandudza ruzivo pane nharembozha
CutefishOS: yakanaka, yemahara uye inoshanda?
CutefishOS, sekureva kwezita rayo, ndeimwe yeaya distros anomira kunze kwekutaridzika kwayo. Asi ine chimwe chinhu chinonakidza here?
Cinnamon 5.2 inosvika ichigadzirira desktop iyo Linux Mint 20.3 ichashandisa
Cinnamon 5.2 yakaburitswa nekuvandudzwa kwekuona uye akawanda systray applets anoratidza rumwe ruzivo, pakati pevamwe.
GNOME 41.1 yakasvika ichivandudza zvikumbiro senge maConnections matsva, pakati pevamwe
GNOME 41.1 yasvika seyekutanga kugadzirisa gadziriso mune ino nhevedzano nekuvandudzwa mumashandisirwo akadai seayo maConnections.
LXQt 1.0.0 inosvika mushure memakore masere ebudiriro nekuvandudzwa kukuru kwakadai seUsavhiringidza maitiro.
Mushure memakore masere aine zero-point versions, LXQt 1.0.0 yauya nekuvandudzwa kwakadai seUsavhiringidza yekuzivisa modhi.
GNOME 40.5 yasvika seyechishanu kugadzirisa kugadzirisa mushure mekusvetuka kukuru, uye iri pano kugadzirisa mashoma.
Lumina Desktop 1.6.1: yakatoburitswa kare
Kune akawanda mamiriro edesktop eGNU / Linux ayo asinganyatso kuzivikanwa, imwe yacho ndeyeLumina Descktop, iyo yatosvika vhezheni yayo 1.6.1
GNOME 42 ichaunza inovandudzwa tema tema iyo inoshanda kunyangwe mune flatpak kunyorera
GNOME 42 ruzivo rwatozivikanwa: ichaunza nyowani yerima tema iyo inoshanda kunyangwe mune sandboxed application senge flatpak.
GNOME 41 inouya neiri nani chitoro chesoftware, matsva emagetsi sarudzo, uye zvimwe shanduko
GNOME 41 ikozvino yave kuwanikwa, iyo nyowani vhezheni yeanonyanya kushandiswa graphical nharaunda muLinux nyika ine mitsva maficha senge nyowani software Center.
GNOME 41 Beta yaburitswa uye isu tinogona kutoona zvimwe zvitsva zveiyo graphical nharaunda nekushandisa kwayo, senge imwe yekufona neVoIP.
GNOME 40.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa muFlatpak, GNOME Shell uye akati wandei mashandiro edesktop inozivikanwa
GNOME 40.4 yasvika seyechina yekugadzirisa inogadziridza mune ino nhevedzano yekuvandudza iyo Shell uye dzakasiyana siyana zvinoshandiswa muprojekti.
MATE 1.26 yauya mushure mehafu yegore rekuvandudza kugadzirisa zvinhu kuWayland, asi zvakare nezvitsva zvezvinhu zvese.
GNOME 40.3 yakaburitswa ine zvinowedzera senge software centre (GNOME Software) iyo inoisa zvigadziriso kana kugadzirisa zvoga.
Kana iwe uchida kuziva imwe nzira yekushandisa kure desktops kubva kune yako GNU / Linux kugovera, iwe unofanirwa kuziva iyo X2Go software
Isu tinoda Plasma, GNOME uye Cinnamon inovhara iyo podium yenzvimbo dzakanakisa dzemifananidzo, asi pane nzvimbo yemunhu wese
Ongororo yakaitwa yakaratidza kuti KDE ndiyo graphical nharaunda yatinoda zvakanyanya, ichiteverwa neGNOME neCinnamon, asi ivo vanofarira vazhinji.
Ongororo: ndeipi yakanakisa graphical nharaunda yeLinux iwe?
Ndeipi yakanakisa graphical nharaunda yeLinux, kana zvakanyanyisa nharaunda inofungei? Ongororo inovaisa vese kumeso.
Accerciser: ziva chirongwa chekuita bvunzo dzekuwanika
Kana iwe uchida kuongorora kuwanika kweako GNOME desktop nharaunda, saka iwe unofanirwa kuziva nezveAccerciser chishandiso
KDE Plasma 5.22 inouya neyakajeka kugadzirisa, Wayland zvinowedzera uye nezvimwe
Iyo nyowani vhezheni yeKDE Plasma 5.22 yave kuwanikwa uye iyi vhezheni nyowani inosimbisa akati wandei makiyi ekuwedzera pakati pe ...
GNOME 40.2 inouya pamwe nekugovana screen pamwe nekumwe kugadzirisa
GNOME 40.2 yasvika senge yekupedzisira vhezheni vhezheni yeiyi inozivikanwa desktop, kugadzirisa screencast uye kugadzirisa bugs
GNU / Linux: Nzvimbo dzeDesktop… zvinoshamisa!
Kune akawanda mamiriro edesktop eLinux distros, asi hapana imwe yeasina kusimba senge andinokuratidza pano.
CutefishOS uye CDE, nyowani system uye desktop inouya kwatiri ichibva kuChina
CutefishOS uye CutefishDE inzira nyowani yekushandisa uye desktop inouya kubva kuChina uye ine chaizvo Apple mufananidzo.
Sekureva kwevagadziri vayo, JingOS haisi iyo inoshanda system, saka mune ramangwana taigona kuona kuberekwa kweiyo JingDE desktop.
Iyo nyowani vhezheni yeTrinity R14.0.10 yakatoburitswa uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo
Iyo nyowani vhezheni yeUtatu R14.0.10 desktop nharaunda yakaburitswa, ichienderera mberi nekuvandudzwa kweKDE 3.5.x uye Qt 3 codebase ...
Budgie 10.5.3 Inosvika neGNOME 40 Kutsigira, Kuvandudza, uye Zvimwe
Vagadziri vekuparadzira kweLinux, "Solus" akazivisa mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeBudgie 10.5.3
GNOME 40 ikozvino inowanika nekuwanda kwekuvandudza, senge yekubata kwepadesi uye ongororo yakagadziridzwa
GNOME 40 iri pano. Iyo nyowani vhezheni yedesktop inouya pamwe nekuwanda kuvandudza, senge yekubata kwepadheti uye mamwe ma tweaks.
GNOME 3.38.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, Mutter uye GNOME Shell
GNOME 3.38.4 yasvika seyechina yekugadzirisa inogadziridza mune ino nhevedzano kuti irambe ichigadzirisa mabugs, asi iine mashoma ekuvandudza.
Plasma 5.21 iri pano, iine nyowani maficha kubva kune yekushandisa kuvhura kune interface tweaks
KDE yakaburitsa Plasma 5.21, yazvino yakakurisa yekuvandudza kune yayo graphical nharaunda ine akawanda anonakidza maficha maficha auchazoda kuyedza.
Wepamusoro 10 Desktop Nzvimbo dzeGNU / Linux
Kana iwe uchinetseka kuti ndedzipi nzvimbo dzakanakisa dzedesktop dzekuparadzirwa kweGNU / Linux, heano epamusoro gumi
Tarisa uone kana paine graphical nharaunda yakaiswa kubva kune koni
Kana iwe uri mune mameseji mode chikamu pane yemuno kana kure system uye iwe uchida kuziva kana paine desktop nharaunda yakaiswa, unogona kuda izvi ...
GNOME 3.38.3 inosvika seyekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa mune dzino dzakateedzana uye inogadzirira nzira yeGNOME 40
GNOME 3.38.3 yasvika seyekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa mune dzino dzakateedzana kuunza shanduko dzekupedzisira pane iyi vhezheni.
Yekutanga alpha vhezheni yeGnome 40 yaburitswa
Yekutanga alpha vhezheni yeGnome 40 ichangoburitswa mune iyo yekutanga shanduko kuchiratidziro ichiunzwa ...
Plasma 5.21 beta inosvika kumisikidza nyowani yeanotanga app, kufamba uye nezvimwe
Iyo beta vhezheni yeakakurumbira KDE Plasma 5.21 desktop nharaunda yakaburitswa, ichiratidza dzinoverengeka shanduko ...
GNOME 40 inogadzirira zvinhu zvakanakisa, senge yekubata kwepadesi
GNOME 40 inoenderera mberi nekuvandudzwa kwayo uye chirongwa ichi chave kufambira mberi zvinonakidza maficha, senge yakagadziriswa interface kana maekisheni pane yekubata pani.
Xfce 4.16 inosvika ine zvakawanda zvinogadziridzwa, senge kutaridzika kutsva uye kuonekana neGTK2
Mushure megore nehafu yekuvandudza, chirongwa chinotungamira chakaburitsa Xfce 4.16, iyo yazvino kuvandudzwa kwenzvimbo iyi isingaremi yakajeka.
Mushure memwedzi yekuongorora dhizaini uye kupedzisa matanhatu akapatsanurwa ekutsvagisa zviitwa, timu yeGNOME Shell inozivisa kuti ...
Iyo itsva vhezheni yeBudgie Desktop 10.5.2 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Iyo itsva vhezheni yeBudgie Desktop 10.5.2 inotsigira iyo GNOME 3.36 uye 3.38 stack zvinhu uye nyowani ...
GNOME 3.38.2 inosvika pamwe neyechipiri kutenderera kwezvigadziriso zveiyi nhepfenyuro
GNOME 3.38.2 yasvika senge yechipiri yekugadzirisa vhezheni yeiyi nhepfenyuro yekuenderera nekugadzirisa mabugs munzvimbo yemifananidzo uye maapplication ayo.
Cinnamon 4.8 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweHiDPI, Icons uye nezvimwe
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza, kuburitswa kweshanduro nyowani yedesktop nharaunda "Cinnamon 4.8" yakaziviswa.
i3wm 4.19 rave kuwanikwa uye aya ndiwo matanho akanyanya kukosha
Iyo nyowani vhezheni ye i3wm 4.19 hwindo maneja yaburitswa uye mune iyi nyowani vhezheni yekuvandudza yakawedzerwa kune iyo i3bar pani iyo ...
LXQt 0.16.0 inoenderera nekuvandudza izvo zvakaunzwa muchirimo kune avo vanofarira mwenje uye yakapusa
LXQt 0.16.0 yasvika isina nhau chaidzoidzo, asi ichienderera munzira yakanaka yakatanga mwedzi mitanhatu yapfuura.
Iyo Trinity R14.0.9 desktop nharaunda yakaburitswa yaburitswa, ichienderera mberi nekuvandudza kwe KDE 3.5.x uye Qt 3 kodhi mabhesi ...
WindowsFX: iri chaizvo Linux Windows 10
WindowsFX chirongwa chaunofanirwa kuziva nezvacho, uye chavanoda kuitisa matopisi kuti vateedzere Windows 10 ine mhedzisiro.
KDE Plasma 5.20 inosvika pamwe nekuvandudzwa mumapaneru, zviziviso, Wayland uye nezvimwe
Iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira KDE Plasma 5.20 desktop nharaunda yakatoburitswa, vhezheni mune yekuvandudza kuri kuenderera kwe ...
Iyo KDE Plasma 5.20 beta yave kuwanikwa uye uku ndiko kugadzirisa kwayo
Munguva pfupi yapfuura zvakaziviswa kuburitswa kweiyo beta vhezheni yeiyo ichave inotevera vhezheni yeKDE Plasma 5.20 uye iyo ...
Iyo projekiti inogadzira imwe yeanonyanya kufarirwa Linux desktops yakafunga kuti yayo inotevera vhezheni inonzi GNOME 40, uye kwete 3.40.
GNOME 3.38 yasvika senge yazvino vhezheni hombe ine maficha manyowani senge yekuvandudza mashandiro uye nyore-ku-kugadzirisa app kuvhura.
GNOME 3.40 inovimbisa kugadzirisa bhatiri manejimendi manejimendi ine marongero matsva nema modes sekuchengetedza kana kuita kwepamusoro
GNOME 3.40 ichaita kuti yako bhatiri rebhatiri igare kwenguva refu nekutenda kune yekuchengetedza modhi inosvika mumwedzi iri kuuya.
GNOME Chikwata Chinozivisa GNOME 3.38 Kuburitswa Kunounza Kwakasiyana Kuvandudza kuMutter
Chikwata chiri kutarisira kusimudzira chakazivisa kuti kwemwedzi miviri yekupedzisira vanga vachishanda pakumanikidza kumanikidza uye ...
GNOME 3.38 Beta Iye Zvino Yava Kuwanikwa, Kugadzirira Kuburitswa kwaGunyana
Iyo purojekiti inobata imwe yeanonyanya kuzivikanwa maficha emifananidzo yakaburitsa yekutanga beta yeGNOME 3.38, yakagadzikana vhezheni mumwedzi.
GNOME 3.36.5 inosvika senge yekupedzisira vhezheni iyi yakateedzana kugadzirisa zvikanganiso muprojekti yedesktop uye maapp
GNOME 3.36.5 ndiyo yekupedzisira poindi yekuvandudzwa mune akateedzana nezvikwiridziro kune zvazvino nhevedzano yeimwe yematafura akakurumbira.
Iyo itsva vhezheni yeI IceWM 1.7 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Kuburitswa kweshanduro nyowani ye IceWM 1.7 kwakaziviswa nguva pfupi yadarika. Iyi vhezheni yemaneja wehwindo inotarisana nekuvandudza ...
GNOME 3.36.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweMutter uye zvimwe zvigadziriso zvidiki
Mushure meiyo nyowani beta vhezheni yechikamu chinotevera, GNOME 3.36.4 yasvika, yekugadzirisa kugadzirisa kugadzirisa mashandiro.
Plasma 5.20 icha (pakupedzisira) shandura mashandisiro anoita maapplication mupaneru wezasi
Plasma 5.20 yatanga kuvandudza kwayo uye mamwe maratidziro atozivikanwa, senge kuti yepazasi bhaa ichave "maikoni chete" nekutadza.
KDE Plasma 5.19 iri pano, ziva kukosha kwayo kwakanyanya uye nhau
Iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira KDE Plasma 5.19 desktop nharaunda yatove pakati pedu umo nhevedzano yekuvandudza inoratidzwa ...
GNOME 3.37.2 inosvika kuti ienderere mberi nekugadzirira pasi peGNOME 3.38, nharaunda ichashandiswa naGroovy Gorilla
GNOME 3.37.2, iyo yakafanana neGNOME 3.38 Beta 2, yasvika kugadzirira iyo graphical nharaunda iyo inosvika mushure mezhizha.
MAUI, pfungwa nyowani nyowani uye isingazivikanwe, asi iyo inonakidza kwazvo. Iyo purojekiti iyo inonunura iyo "yakakanganwa" kusangana uye inoenderera mberi
Kana iwe uine iyo nyowani Ubuntu 20.04 distro uye uchida kuisa iyo Unity graphical shell, iwe unogona kutevedzera aya matanho akareruka mune iyo dzidziso
Mushure memwedzi mipfumbamwe yekuvandudza, kuburitswa kweshanduro nyowani yemukurumbira mushandisi nharaunda "Enlightenment 0.24" yakaziviswa ...
KDE yakaburitsa Plasma 5.19 beta, ichave iri inotevera huru kuburitswa kwayo graphical nharaunda yakarongerwa kutanga kwaJune.
Cinnamon 4.6 Inosvika neFactional Scaling Enhancements, Yakawedzera Tsigiro, uye Zvimwe
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza, kuburitswa kweshanduro nyowani yenzvimbo inozivikanwa yedesktop yakagadziriswa neLinux Mint yakaziviswa ...
Pineloader, multibootloader nyowani yefoni yako yeLinux
Pineloader, multibootloader nyowani yeLinux nhare dzinokutendera kuti usarudze sisitimu ipi yaunoda kushandisa kana uchitanga mudziyo wako.
GNOME 3.36.2 ikozvino yavapo, inogadzirisazve TLS 1.0 / 1.1 uye kugadzirisa marudzi ese ebugs
GNOME 3.36.2 yakaburitswa zviri pamutemo sekuburitswa kwechipiri kwekuchengetedza mune dzino dzakateedzana kusimudzira mashandiro uye kuvimbika.
TDE inopemberera gore regumi regumi neiyo nyowani vhezheni R14.0.8
Vagadziri venzvimbo yedesktop "Utatu" vari kupemberera uye ndezvekuti ivo havasi ivo chete vanofara kuzivisa yavo yegumi yegumi chirongwa ...
LXQt 0.15.0 inosvika senge yekutanga huru yekuvandudza kune graphical nharaunda inoshandiswa naLubuntu mune rinopfuura gore
LXQt 0.15.0 yasvika seyekutanga kuvandudza kune isingaremi magiraidhi enharaunda mukati megore riine zvinhu zvitsva zvinozivikanwa.
Gnome 3.36 yave kuwanikwa uye idzi ndidzo dzinonyanya kukosha shanduko
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza vakomana vari shure kwekusimudzirwa kweGnome, vakazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeGnome 3.36 ..
Iyo nyowani vhezheni ye i3wm 4.18 yakatoburitswa, iine zvimwe zvitsva uye zvigadziriso zvebug
Michael Stapelberg (aimbova anoshanda anoshanda weDebian) akazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani yeiyo i3wm 4.18 windows maneja ...
Iyo itsva vhezheni yeMATE 1.24 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Maawa mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeMATE 1.24 desktop nharaunda yakaziviswa, inova nharaunda ine chimiro chinoenderera ...
KDE Plasma 5.18 inouya nekuvandudzwa kwemajeti, zviziviso uye nezvimwe
Iko kuwanikwa kweiyo nyowani vhezheni yeKDE Plasma 5.18 desktop nharaunda, iyo yakavakirwa papuratifomu yeKDE, yakaziviswa.
Dconf mupepeti: chishandiso chine simba kwazvo chinofanirwa kubatwa nehanya
Kugadziriswa kupfuura izvo zvakajairika desktop tweaks muUbuntu ine simba dconf edhiyo chishandiso iwe chaunogona kuisa
Deepin v20 ichave imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzemifananidzo dzatakaona
Deepin v20 yakavhurwa mwedzi unouya uye, kubva pane zvatiri kuona, ichave imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzemifananidzo inowanikwa muLinux.
Iyo nyowani vhezheni yeKDE Plasma 5.17 desktop nharaunda yakaburitswa
Iyo nyowani vhezheni yeKDE Plasma 5.17 yave kuwanikwa, inova tsika shell yakavakirwa ichishandisa iyo KDE fomati 5 chikuva uye ...
Iyo beta KDE Plasma 5.17 yave kuwanikwa, ziva nhau dzayo
Iyo beta vhezheni yeKDE Plasma 5.17 yakatoburitswa kuruzhinji ruzhinji nevashandisi vanofarira vachakwanisa kuita iwo akakodzera bvunzo ...
GNOME 3.34 yasvika pane yepamutemo Arch Linux repositories, izvo zvakakonzera kuti ive yave kuwanikwa paManjaro Linux.
Kuvhenekerwa 0.23, hukuru hukuru hwenzvimbo yemifananidzo ine zvakawanda zvinogadziriswa
Kuvhenekerwa 0.23 yaburitswa, hombe nyowani vhezheni yegrafiki nharaunda iyo inosanganisira akawanda magadziriso uye kugadzirisa muWayland.
Isu tinokuudza iwe zvese zvese zveiyo nyowani vhezheni yechiedza graphic desktop Xfce 4.14, isu tinokuudzawo kuti ungazviedza sei izvozvi.
Ivo vakawana kukanganisa kwekuchengeteka muPlasma, asi KDE yakagadzirisa mukubwaira kweziso
Chikanganiso chikuru chekuchengetedza chakawanikwa svondo rino muPlasma, asi iyo KDE Nharaunda yakakurumidza uye zvino yagadziriswa.
Maviri Linux desktop giants, KDE uye GNOME, ichabatana nemauto kugadzira inotevera chizvarwa software uye kubatanidza nharaunda.
Iyo nyowani vhezheni ye i3wm 4.17 hwindo maneja waburitswa
Iyo nyowani vhezheni yeiyo i3wm 4.17 windows maneja ichangobva kuziviswa, vhezheni iyo yakawedzera rutsigiro rwe ...
Plasma 5.16.4, yekupedzisira vhezheni yeiyi nhevedzano, inosvika kugadzirisa 18 zvikanganiso
KDE Nharaunda yakaburitsa Plasma 5.16.4, yechina uye yekupedzisira vhezheni yeiyi nhepfenyuro inouya kugadzirisa huwandu hwese gumi nembiri dzinozivikanwa.
Jade, "ingori imwe graphical nharaunda" zvichibva pawebhu tekinoroji
Jade, kubva ku "Just Another Desktop Nharaunda", inzvimbo nyowani yakajeka iyo yakavakirwa zvakanyanya pawebhu tekinoroji uye inotaridzika chaizvo.
KDE Inoburitsa Svondo: Plasma 5.16.3 uye KDE Zvishandiso 19.04.3 Zvino Zviripo
Vhiki rino rave rekuburitswa muKDE Nharaunda: ivo vakaburitsa KDE Zvishandiso 19.04.3 uye Plasma 5.16.3, yazvino vhezheni yavo yakajeka graphic nharaunda.
Iwo matsva matsva ari pano: Plasma 5.16 ikozvino yavapo
Iye zvino inowanikwa Plasma 5.16, iyo nyowani vhezheni yeiyi inozivikanwa graphical nharaunda inouya nenhau zhinji dzakakosha, dzinoonekwa uye dzisingaonekwe.
KDE Plasma 5.16 inoratidza yayo nyowani Wallpaper
Inotevera KDE Plasma 5.16 desktop nharaunda iri kuuya nekukurumidza uye nhasi kumashure kweiyi nyowani vhezheni yakaburitswa.
Iyi ichave iri nyowani yePlasma 5.16 yekuzivisa system
Plasma 5.16 ichaunza nyowani yekuzivisa system izere nemabasa anonakidza atino tsanangura muchinyorwa chino.
GNOME 3.32 inogamuchira yechipiri uye yekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa
Yechipiri yekugadzirisa yekuvandudza yeGNOME 3.32 iri pano, munguva pfupi tichava nebeta yeGNOME 3.34
GNOME 3.34 inoenderera mberi chikamu chayo chekuvandudza neGNOME 3.33.1 yatove mubeta
Kuburitswa kunotevera kweimwe yematafura akakurumbira, GNOME 3.34 yatotanga chikamu chayo chekuvandudza. GNOME 3.33.1 yatove mubeta.
Iyo itsva vhezheni yeTrinity desktop R14.0.6 yaburitswa
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvandudza, kuburitswa kweshanduro nyowani yeUtatu R6 desktop nharaunda yakaziviswa, iyo inozivikanwa ne ...
MATE 1.22 ikozvino yavapo. Idzi ndidzo nhau dzadzo dzakatanhamara
Iyo graphical nharaunda MATE 1.22 yave kuwanikwa. Mune ino posvo isu tinokuudza iwe yakanyanya kusarudzika nhau kubva pakati peanopfuura 1900 shanduko akaunzwa.
KDE Plasma 5.15.3 iri pano ine Flatpak yekuvandudza uye nezvimwe
Uku ndiko kugadzirisa kuri mu KDE Plasma 5.15.3, iyo nyowani yekugadzirisa yekuvandudza kweiyo KDE Plasma 5.15 nharaunda nekuvandudza uye kugadzirisa.
GNOME 3.34 ichaburitswa munaGunyana 11, GNOME 3.32 inosvika nhasi
Iyo GNOME 3.34 nzira yemugwagwa yakaburitswa uye Ubuntu nyowani default graphical nharaunda ichasvika mushure mezhizha.
Isu tinokuratidza izvo zvitsva mu KDE Plasma 5.15.2, yechipiri yekugadzirisa yekuvandudza yeiyi vhezheni yemifananidzo yakajeka
KDE Mapurani 5.55 iri pano nekuvandudza kwakawanda uye maficha nyowani
Ingori nguva yeKDE Plasma 5.15, isu tatova ne KDE Maumbirwo 5.55, iyo yekuvandudza kune iyo KDE software suite inouya nekuwanda kuvandudza
OpenMandriva 4.0 Beta: kujairana kwekare nenhau
OpenMandriva 4.0, isu tatova neBeta vhezheni yechirongwa ichi chakare chakagadziridzwa kune vese vateveri veiyo distro
Iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeKDE Plasma 5.15 desktop nharaunda inosvika
KDE Plasma 5.15 inowedzera akawanda matsva maficha uye zvitsva pamwe nekugadzirisa mamwe mabugs kubva kune yapfuura vhezheni yezvakatipoteredza.
LXQt 0.14 ine split maonero efairaja maneja iri pano
Isu tinokuudza iwe inonyanya kukosha nhau dzeLXQt 0.14.0, iyo nyowani nyowani yeiyo Lightweight Qt desktop nharaunda.
GNOME 3.32 ichave neshanduko huru mune yayo icon theme
GNOME 3.32 iri kuuya neyakajeka nyowani icon theme iyo ichave iine zvirinani kuvandudza kugarisana, pamwe neiyo nyowani software.
GNOME Software ichave nerutsigiro zvirinani rweFlatpak muGNOME 3.32
Iyo nyowani yekuvaka yeGNOME Software 3.32 yasvika uye inoratidza zvirinani kutsigirwa kweFlatpak kunyorera.
KDE Plasma 5.14 inovandudzwa uye inosvika kumagumo ekutenderera kwayo
KDE Plasma 5.14 inogamuchira yayo yechishanu yekuvandudza, KDE Plasma 5.14.5, ichicherekedza kuguma kwehupenyu hwayo, chii chinouya chinotevera cheKDE?
KDE Plasma 5.14.2 iri pano ine zvakawanda zvinonakidza kugadzirisa
Iwe unogona ikozvino kuisa KDE Plasma 5.14.2 uye unogamuchira zvinopfuura makumi mana shanduko dzinosanganisira zvigadziriso uye nhau mune ino inozivikanwa desktop desktop
Nhasi tichave tichiziva nzira yekuwana ino desktop desktop iyo inodarika imwe yaifarira ...
Nhasi zvakaziviswa kuti iyo Librem 5 kubva kuPurism ichauya neGNOME 3.32 graphical nharaunda uye akasiyana GNOME mafomu.
Nitrux OS 1.0.16: nyowani vhezheni yedistro yakaburitswa
Nitrux Os iri yekuparadzira yeGNU / Linux yakavakirwa paUbuntu uye ikozvino inouya neshanduro nyowani yeshanduro yayo yazvino kusvika zvino, 1.0.16
KDE Plasma 5.15 ichatanga nekukurumidza, tarisa kuvandudza kwayo
Vagadziri ve KDE vatotanga kutaura izvo zvitsva zve KDE Plasma 5.15, inotevera inotevera yekuvandudza kune desktop desktop.
GNOME 3.30 Inowana Yekutanga Kugadziridza Kugadziridza, Yakagadzirira Mass Kuisirwa
Isu tinokuudza zvese zvese zvekutanga kuvandudzwa kweGNOME 3.30, GNOME 3.30.1 nekugadziriswa kwebug uye kugadzirisa mune zvimwe zvakakosha zvikamu
7 madingindira emazuva ano eKDE Plasma desktop nharaunda
Pasina kupokana, KDE Plasma ndeimwe yenzvimbo dzinoyevedza uye dzemazuva ano dze desktop dzeLinux dzatinogona kuwana uye zvakare dzine ...
pasina mubvunzo kugadziriswa kwenzvimbo dzeLinux desktop ndeimwe yezvakanaka zvinokwezva zvinotarisisa kune vamwe vazhinji vashandisi ...
Beta yekutanga yeKDE Plasma 5.14 iri pano
Iyo yekutanga beta yeKDE Plasma 5.14 yasvika uye iwe unogona kuitora izvozvi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti, isu tinokuudza iwe imwe yenyaya dzayo
GNOME 3.30 Almeria iri pano, idzi ndidzo dzinonyanya kukosha nhau
Chekupedzisira pano panotarisirwa GNOME 3.30 ine kodhi zita Almeria, ziva dzese nhau dzeiyi nyowani vhezheni yenzvimbo inozivikanwa yemifananidzo
Nzira nhatu dzekushanda neChiedza pane komputa yako
Nongedzo diki yekuti ungave nekushanda sei neChiedza pakombuta yedu tisingafanire kusiya Gnu / Linux kana runako padesktop ...
JWM isingaremi windows hwindo maneja iyo yatinogona kuisa pane chero Gnu / Linux kugovera uye izvo zvinotibvumidza isu kuchengetedza macomputer zviwanikwa zvakanyanya sezvinobvira.
GNOME 3.30, inotevera inotevera kuvandudzwa kweiyo GNOME chirongwa, yagamuchira yechipiri beta vhezheni ine yakawanda inonakidza shanduko
Nautilus 3.30: hukuru hwekuvandudza mune maneja wefaira
GNOME Files (Nautilus) iri, sekuziva kwako, ndiyo default faira maneja anoshandiswa neGNOME desktop nharaunda, seKDE Plasma.GNOME faira maneja inovandudzwa nekusvika kwenyowani Nautilus 3.30 vhezheni. Uye inozviita nenzira hombe, iine zvakakosha kugadzirisa.
KDE Kunyorera 18.08 Software Suite yapinda Beta nhanho yekusimudzira, saka isu tichazofanira kumirira kwenguva yakati rebei kuti tinakirwe neKDE Kunyorera 18.08 Software Suite inopinda yayo Beta nhanho yekusimudzira uye munguva pfupi inotevera tichakwanisa kunakidzwa neshanduro yekupedzisira nezvose kugadzirisa
Cinnamon 4.0 ichave inowirirana zvikuru nemakadhi eNvidia
Cinnamon 4.0 yatove mukubudirira. Iyo itsva vhezheni yedesktop ino ichaedza kuita kuti ikurumidze kupfuura zvakajairwa uye kugadzirisa matambudziko e ...
Chromium OS yeRaspberry Pi uye SBCs… inoonekazve
Kune akawanda akagoverwa uye anoshanda masystem eakasiyana maSBCs pamusika, kunyanya kune anozivikanwa kupfuura ese, iyo Chromum OS yeRaspberry pi uye mamwe maSBC airatidzika kunge apera asi izvozvi zvinowonekazve nedzimwe nhau dzakanaka dzatinokuudza
KDE Kunyorera 18.04 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo, vhezheni 18.08 inosvika muna Nyamavhuvhu 16
KDE Kunyorera 18.04 inosvika kumagumo ehupenyu neyechitatu yekuvandudza, nyowani huru vhezheni ichaburitswa muna Nyamavhuvhu
Kubuntu 18.04 LTS vashandisi vanogona ikozvino kusimudzira kuKDE Plasma 5.12.6
Kana iwe uri Kubuntu 18.04 LTS mushandisi isu tine nhau dzakanaka kwauri, iwe unogona ikozvino kuisa KDE Plasma 5.12.6 zviri pamutemo
KDE Plasma 5.13.3 yakaburitswa neanopfuura makumi matatu ekuwedzera
Isu tinokuudza iwe zvese zvese nezve nyowani KDE Plasma 5.13.3 kuburitswa, yechitatu yekugadzirisa kugadzirisa yeiyi vhezheni yemifananidzo yakajeka.
Ungachinja sei theme yeUbuntu uye zvimwe zvekugovera zvinoshandisa Gnome
Dzidziso diki yekuchinja musoro weUbuntu uye zvimwe zvekugovera zvinoshandisa Gnome. Zano diki iro rinotibatsira kugadzirisa pc yedu
Dzidziso diki yemashandisiro uye macOS Mojave wallpapers pane yedu Gnu / Linux Gnome desktop ...
Isu tinokuratidza iwo matsva ekushandurwa ari kugadzirwa neGNOME vagadziri ekugadzira kumenyu yavo yekushandisa
Maitiro ekuisa iyo Deepin desktop mune yedu Gnu / linux kugovera
Dzidziso diki yekuti ungaisa sei iyo Deepin desktop mune yedu Gnu / Linux kugovera, yakapusa uye inokurumidza maitiro kana kugovera kwedu kuri pamusoro
Deepin 15.6 Linux OS yakaburitswa neakagadziridzwa HiDPI rutsigiro
Kugoverwa kweChinese GNU / Linux iyo yakapa kuwongorora kwakawanda kwakawanda, Deepin, yadzoka neshanduro 15.6 iyo inosanganisira kuvandudzwa uye kutaridzika kutaridzika.
KDE Plasma 5.13 yakaburitswa zviri pamutemo nenhau dzinonakidza
KDE Plasma 5.13 iri pano nedzimwe dzinonakidza nhau dzevateveri veiyi yakasimba uye inogadziriswa desktop desktop.
Gnome Shell Screen Recorder, chishandiso chakanakira kutora chinofamba chinovhara chinyorwa, ndokuti, mavhidhiyo madiki edesktop yedu ...
Gnome 3.30 ichauya nerutsigiro rweARM64
GNOME 3.29.2 yakaburitswa seyechipiri kuvandudzwa kwezvina zvekuvandudza zvimiro zveGNOME 3.30 desktop nharaunda. Iyo inouya mavhiki mashanu mushure mekutanga snapshot, GNOME 3.29.1, iine zvakatowanda kugadzirisa uye zvitsva maficha mune akasiyana zvikamu.
Hapanazve kuvhura kunyorera kubva kuNautilus yeGNOME
GNOME haibvumire kunyorera kutangwa kubva kuNautilus uye pano isu tinokuudza iwe zvikonzero zvechisarudzo ichi.
Gnomecast, application yekuda kuziva iyo ichatibvumidza kushandisa Chromecast paGnu / Linux
Dzidziso diki yekuisa Gnomecast pane yedu Gnome desktop. Chikumbiro chinotibvumidza kushandisa Chromecast tisingashandise Google Chrome kana Windows ...
Maitiro ekuisa Gnome yekuwedzera
Dzidziso diki yekumisikidza Gnome yekuwedzera pane yedu Gnu / Linux kugovera. Gwaro diki iro rinobatsira mushandisi wevashandisi kugadzirisa uye nekuvandudza yavo Gnome desktop ...
Dzidziso diki yekuwedzera kana kubvisa zvirongwa zvekutanga mukuparadzira kweGnu / Linux. Nhungamiro yekuiita pakati pematafura ane mukurumbira uye anozivikanwa mukati meGnu / Linux nyika ...
5 makuru madingindira eiyo LXDE desktop
Chinyorwa chidiki pane iwo mashanu akanakisa madesktop desktop yeLxde desktop. Dhirowa yakajeka yezvikwata zvine mashoma zviwanikwa asi izvo hazvireve kuti hazvigone kuve akanaka kumeso edu ...
Kugoverwa kweKaOS kunochinja 5
Imwe yeakakurumbira ekuparadzirwa kweGnu / Linux mu KDE nyika yatendeuka makore mashanu. Uye kuipemberera, KaOS yatanga chakasarudzika vhezheni yayo yekushandisa system, vhezheni inovandudza uye inovandudza kugovera kwayo ...
Tora kutaridzika kweUkubatana nekutenda kune iyo Gnome Unite yekuwedzera
Dzidziso diki yekuisa nekugadzirisa yedu Gnome yekutenda kune iyo yekuwedzera inonzi Unite, chiwedzerwa chinotipa kutaridzika kweUbatana pasina chikonzero chekuti Ubuntu iiswe ...
Shandisa iyo Elementary OS desktop nharaunda pane Debian 8
Kana iwe wakamboshandisa Elementary OS kana kuziva zvishoma nezvazvo kubva kumavhidhiyo kana mifananidzo, iwe unozoziva kuti iyi Ubuntu-based Linux kugovera ine yayo desktop desktop iyo isingawanikwe chete kune yako system, asiwo kune vamwe vese.
Iyo inotevera vhezheni yeCinnamon ichakurumidza kupfuura zvakajairwa
Iyo inotevera vhezheni yeCinnamon ichakurumidza kupfuura izvo zvazvino vhezheni Zvirinani ndizvo zvakatarwa nemutungamiri weprojekti Clem Lefebvre ...
Isa iyo KDE Desktop nharaunda pane ArchLinux
KDE ndeimwe yenzvimbo dzakawanda dzedesktop dzatinogona kuve nadzo kune yedu Linux inoshanda sisitimu, iyi nharaunda iri pakati peyakakurumbira uye inoshandiswa nechikamu chakakura chenharaunda yeLinux, nekuda kwekugamuchirwa kwayo kukuru nenhamba huru yekugovera.
Kune atove maviri maitiro ekuisa Plasma Mobile pane chero Android smartphone. Nekudaro, idzi nzira hadzifanirwe kushandiswa panhare dzese dzemazuva ese ...
Nzvimbo dzakanakisa dzedesktop dzebhizinesi
Mune zvimwe zvinyorwa isu takatsanangura rondedzero yeakanakisa ekugoverwa kweGNU / Linux kune mamwe niches kana kune mamwe mabasa, anga ari ...
Yekutanga Plasma Mobile ISO chifananidzo chave kuwanikwa, chifananidzo chekuyedza mumuchina chaiwo kana zvakananga pakomputa yekuyedza kuyedza shanduro dzekuvandudza dzePlasma Mobile ...
Lumina 1.4, vhezheni itsva yedesktop isingazivikanwe
Iyo Lumina desktop inofamba zvishoma nezvishoma ichienderera mberi. Lumina 1.4 vhezheni ichangoburitswa, vhezheni yakagadziridzwa pamwe nekumwe kugadzirisa ...
Canonical yakave nhengo yeGnome Foundation Advisory Board. Sarudzo yakashamisa vazhinji nekumhanya kwayo ...
LXQt 0.12.0 Kuburitswa kuri kunze nekuvandudza kukuru uye neshanduko
Vagadziri veLightweight Qt Desktop Enviroment, kana zviri nani kuzivikanwa seLXQt, vazivisa kuti nyowani ...
KDE Plasma 5.11 inouya nezvinhu zvitsva
KDE vagadziri boka rakashanda nesimba kuti isu tive nePlasma 5.11, vhezheni nyowani yenzvimbo iyi ...
dconf: dzorera default marongero edesktop nharaunda
Resetter chishandiso chinodzosera fekitori yeUbuntu kana default parameter mumaminetsi mashoma, e ...
Zorin OS 12.2: iyo nyowani vhezheni yeanozivikanwa distro anodzoka aine nhau
Isu tatova nechiziviso uye kuvhurwa kweshanduro nyowani yeino kuzivikanwa kugoverwa kweGNU / Linux, ndiri kutaura nezveZorin OS ...
Gnome 3.26 iri kunze
Iyo Gnome 3.26 desktop yakangobuda, ichiunza pamwe nezvimwe zvakakosha kugadzirisa, zvese mukuita uye aesthetics.
Qupzilla ichatsiva Konqeror sewebhu browser yeiyo KDE Project
Iyo yakakurumbira Qupzilla browser yauya kune iyo KDE Project. Iri bhurawuza rinotsiva iro rekare Konqueror se KDE desktop web browser ...
Gnome Tweak Chishandiso inonzi zvakare Gnome Tweaks
Gnome Tweak Turu yakachinja zita rayo. Iyo yakakosha Gnome yekugadzirisa chishandiso ikozvino ichanzi Gnome Tweaks ...
Nautilus ichavandudza yeGnome 3.26
Nautilus ichachinja neiyo nyowani vhezheni yeGnome. Iyi vhezheni itsva inosanganisira zvitsva zvinozoita kuti maneja wefaira awedzere kugadzira uye nekukurumidza ...
Gnome Pie 0.7.1, vhezheni nyowani yechinhu chakakurumbira cheGnome chishandiso
Gnome Pie 0.7.1 ndeye yekutanga application iyo inotsigira Wayland uye iyo inotibatsira isu kuburitsa mashandiro nekukurumidza ...
KDE Kube, uyo anotevera anotevera KMail?
KDE Kube ine zvinyorwa zvitsva. Shanduro nyowani dzinoita kuti vazhinji vafunge kuti ndiye achave anotsiva KMail, zvirinani mushure mekukakavadzana kwazvino.
Gnome Tweak Turu chishandiso chekushandisa icho chinotibvumidza isu kugadzirisa Gnome kune kwedu kufarira uye kunyange kuwedzera Global Menyu sarudzo ...
Feren OS: kugoverwa kunoshamisa kwaunofanira kuziva
Kugoverwa kweFeren OS ndeyechokwadi kwekutaurwa nezvayo, uye vazhinji vakatove vachida kwazvo. Chokwadi…
Arc Menyu: iyo yekutsiva yeGNOME Shell app kuvhura
Canonical yakaedza kuenzanisira GNOME pakuda neUbatana, asi sezvamunoziva, haichazoshandiswazve mushanduro dzeramangwana ...
Xfce 4.14 ichauya neGTK3 +
Imwe yenyaya dzichangoburwa yakaratidza kuti Xfce 4.14 ichabatanidzwa neGTK3 +, chimwe chinhu chiri chokwadi chikuru kune wese munhu.
Maitiro ekuwana Plasma 5.10 yekugovera kwedu
Diki dhairekitori maitiro ekuvandudza yedu vhezheni yePlasma zvinoenderana nekugovera kwatinoshandisa, chimwe chinhu chinobatsira kune avo vanoda kuyedza Plasma 5.10 ...
KDE Plasma 5.10 inowanikwa
Iyo KDE Plasma 5.10 desktop yave kuwanikwa zviri pamutemo uye ichakurumidza kuverengerwa muzvinyorwa zvekufarira kwako kugovera.
Maitiro ekuisa theme nyowani muLXDE
Dzidziso diki yekuti ungaisa sei nyowani nyowani pane iyo LXDE desktop. Rakareruka gwara rekuti ungawedzera sei theme uye usingade mamwe maturusi
Maitiro ekuisa theme mune Gnome
Dzidziso diki yekuisa nyowani desktop theme pane yedu Gnome. Maitiro atinoita isu tese dzimwe nguva pane pc yedu ...
Sinamoni 3.4 iri kunze izvozvi; izvi ndizvo zvitsva zvinounzwa neLinux Mint desktop
Cinnamon 3.4 ndiyo itsva vhezheni yeLinux Mint desktop. Desktop yakavandudza mabasa ayo ekuwedzera kuti ave anoshanda ...
Chinyorwa chakatangwa icho chinotibvumidza isu kushandura yedu Gnome Shell kuti itaridzike seMacOS, Windows kana Kubatana, asi Gnome Shell ichiripo ...
Gnome 3.26 ichatanga kusimudzira svondo rinouya
Gnome 3.26 ichave inotevera huru vhezheni yeGnome kuti ibude. Iyi vhezheni ichatanga kukura kubva Muvhuro, budiriro yakatakurwa neshanduko ...
Wepamusoro 5 Gnome Shell Kuwedzeredzwa
Runyorwa rudiki rwekuwedzera kwatinofanira kushandisa muGnome Shell kuita kuti desktop iwedzere kushanda uye inoshanda, chimwe chinhu icho vashandisi vari kutsvaga ...
Kubatana 7 kucharamba kuri muUbuntu maererano naMark Shuttleworth
Kubatana 7 kucharamba kuri muzvivakwa zvepamutemo zveUbuntu, zvirinani ndizvo zvakaratidzwa naShuttleworth mumaprofiles avo enhau ...
Vagadziri vacho vashanda nesimba kusanganisa rutsigiro rweFirefox Sync muGNOME Web (inozivikanwawo seEpiphany).
Gnome 3.24 yave kuwanikwa kune wese munhu. Iyo nyowani vhezheni yeiyi dhesiki rekare yatove mumugwagwa uye isu tinokuudza iwe dzese nhau dzainounza ...
KDE Unganidzo ikozvino inogona kutumira sms kubva kune chero desktop
KDE Unganidzo chikumbiro icho chinotibvumidza isu kuti titaure nefoni yedu kuburikidza neiyo pc. Yazvino yekuvandudza yeapplet yatobvumidza iwe kutumira sms ...
Kujekeswa 0.21.7 - Yakaburitswa pamwe nekuvandudzwa
Kune akawanda mamiriro edesktop emahara anoshanda masystem, sezvatinoziva tese, kunyanya kune GNU / Linux, kunyangwe mamwe acho ari ...
MATE 1.18 yave kuwanikwa kune wese munhu
MATE 1.18 ndiyo vhezheni nyowani yeakakurumbira MATE desktop, forogo yeGnome 2 yeakanyanya nostalgic iyo yakave nekugamuchirwa kwayo kukuru pakati pevashandisi.
Gnome 3.24 ichave ine bhuruu mwenje firita semafoni
Iyo inotevera vhezheni yeGnome, Gnome 3.24, ichave ine bhuruu mwenje firita nekumisikidza iyo inotibatsira isu kutarisira hutano hwemeso edu ...
KDE ichafanirwa kusarudza pakati Flatpak mapakeji uye snap mapakeji
Vagadziri vanoverengeka vanonyevera nezve dambudziko iro iro KDE Nharaunda ichafanirwa kusangana pakati peFlatpak mapakeji uye Ubuntu Snap mapakeji ...
Iye zvino inowanikwa Plasma 5.9.1, yekutanga yekuchengetedza vhezheni yePlasma 5.9
KDE Plasma yatove neyakagadziriswa yekuburitsa inogadzirisa madhigi uye matambudziko edesktop. Iyi vhezheni inozivikanwa sePlasma 5.9.1 ...
Mir, Canonical's graphical server ine shanduko nyowani
X iri sezvaunoziva default graphical server kune mazhinji emazuva ano Unix-senge anoshanda masisitimu, kusanganisira Linux. Asi…
Iyo Global Menyu inodzokera ku KDE nekuda kwePlasma 5.9
Plasma 5.9 yave kuwanikwa kune wese munhu. Iyo inozivikanwa desktop ine vhezheni nyowani inobudirira uye inosanganisira Global Menyu ...
Chinyorwa chidiki chekuti tingadzore sei yedu yazvino vhezheni yeDebian mune yekutanga vhezheni dzeUbuntu, neiyo yekare Gnome uye yayo desktop desktop ...
Mutungamiri weSolus akazivisa kuti Budgie Desktop 11 ichatanga kushandisa maraibhurari eQT nekuda kwematambudziko akagadzirwa nemaraibhurari eGTK ...
Cinnamon Spices, iyo itsva Cinnamon iyo ichavandudza edu menthol desktop
Cinnamon Spices ndiyo nyowani kubva kuCinnamon iyo ichaita kuti desktop yedu ive yakasarudzika kana zvichibvira asi pasina kurasikirwa nechengetedzo nezvayo ...
KDE Neon naJ. Riddell vakaburitsa iyo ISO mufananidzo we KDE Neon ine Plasma 5.9 uye Wayland seye graphical server, mufananidzo wekuvandudza weiyo itsva KDE ...
Maitiro ekuisa plasmoids pane yedu Plasma desktop
Mudiki dhairekitori maitiro ekuisa plasmoids pane yedu KDE Plasma desktop. Gwara diki rekuwedzera maplasmoid nyowani kana kuisa yako wega ...
KDE Plasma 5.8.5 LTS inouya Kubuntu
Vashandisi veKubuntu vane mhanza, sezvo iko iko kuwanikwa kweiyo yazvino vhezheni yeKDE Plasma paUbuntu kwatoziviswa.
Lumina 1.2 ndiyo vhezheni nyowani yehuremu hweLumina desktop. Desktop iyo yakaberekerwa BSD asi yasvika Gnu / Linux kune vese vashandisi ...
Plasma 5.9 inosvika mukati memwedzi kumasisitimu edu
Plasma 5.9 ichave ichokwadi mukati memwedzi wekutanga wegore. Chokwadi, kuvhurwa kweshanduro nyowani kwakaziviswa muna Ndira 31 ...
Debian + PIXEL Desktop kubva kuRaspberry Pi Foundation
Isu tato taura munguva yakapfuura nezve iyo PIXEL Desktop chirongwa, ino inonakidza desktop desktop iyo iyo Raspberry Pi Foundation ine…
Budgie 10.2.9 yakaburitswa neHiDPI zvinowedzera
Budgie Desktop inzvimbo nyowani nyowani yedesktop iri kuwana yakawanda buzz munguva pfupi yapfuura. Zviri nezve dhesiki ...
KDE Plasma Zvirongwa zve2017: Matatu egore Anoburitswa, Global Menyu, Wayland, uye Zvimwe
Vagadziri veKDE Plasma vakaisa akati wandei ezvinangwa zvikuru kwemakore maviri anotevera, uye isu tinokuudza nezve mamwe acho.
WattOS: isina kuremara, yakasimba, yese-chinangwa distro
WattOS kugoverwa kwakareruka, kwakasimba sedombo uye kwakajairika, ndiko kuti, unogona kuishandisa chero chinhu, ...
KDE Plasma 5.8 LTS yasvika; yekutanga vhezheni iyi yekupa rutsigiro rwakawedzerwa. Uye inoita izere nenhau kune vese vashandisi.
Cinnamon 3.2 ichaita mapaneru akamira senge Kubatana
Cinnamon 3.2 inobvumidza kushandiswa kweanomira mapaneru pamwe nekushandisa accelerometer neiyo nyowani vhezheni yeLinux Mint desktop ...
Pixel, Raspberry Pi Foundation desktop nyowani kukwikwidza neLxde
Pixel ndiyo desktop nyowani iyo iyo Raspberry Pi Foundation yakagadzira kutakura Raspbian uye kushanda pamapurodhi avo, isina kurema desktop ...
Iko kutove neshanduro nyowani yeLXQt desktop, iyo LXQt 0.11 vhezheni, vhezheni inogadzirisa akati wandei matambudziko pane iyo nyowani, isina kurema desktop ....
Dell XPS Mushanduri Wenyaya + Ubuntu + Cinnamon = Linus PC
Nguva zhinji vagadziri ve kernel vakabvunzwa kuti ndeupi mugove wavanoshandisa mune yavo ...
Iyi ndiyo Lumina 1.0
Iko kuwanikwa kwazvino kweLumina 1.0 desktop, desktop iyo yatove kuwanikwa munzvimbo zhinji, yakaziviswa nguva pfupi yadarika.
10 zvikonzero zvekushandisa isingaremi desktop
Sezvo isu tese tatoziva, kune mhando mbiri dzematafura muLinux nyika, yakajairika desktop uye isina kurema desktop, isu tichaona zvikonzero zvekumisa lightweight
KDE Plasma 5.7 iri kunze izvozvi
KDE Plasma 5.7, imwe yematafura akakurumbira pane ese, yave kuwanikwa. KDE Plasma 5.7 ine yakakosha maficha maficha.
Antergos inogamuchira Cinnamon 3 uye MATE 1.14 pamberi peLinux Mint
Antergos yatove neshanduro nyowani dzeCinnamon neMATE, desktops dzinogona kuwanikwa kuburikidza nechengetedzo ...
Vintage: CDE iyo quintessential Unix desktop nharaunda
CDE (Yakajairika Desktop Nharaunda) inzvimbo yekare yedesktop iyo iwe yawakanyatsonzwa nezvayo. Iye zvino nemaprojekiti makuru ...
Maitiro ekuisa Cinnamon pane Debian 8.x Jessie
Sezvo nguva dzose, kugadzirisa Linux kuri nyore chaizvo uye izvi hazvisi izvo: ngatione maitiro ekuisa Cinnamon paDebian.
Maitiro ekuisa GNOME 3.20 paUbuntu GNOME
Kunyangwe Ubuntu GNOME ichiuya neshanduro 3.18 yedesktop, isu tinogona ikozvino kugadzirisa kuGNOME 3.20 nenzira yakapusa.
GNOME Pasina Systemd, gadza GNOME paGentoo uye Funtoo pasina kutsamira neSystemd
Iyi chaiyo projekiti inokurudzira kubatsira Gentoo neFuntoo vashandisi kuisa iyo GNOME desktop pasina kutsamira neSystemd
Unotoziva, kune akawanda desktop nharaunda yeGNU / Linux uye mamwe masisitimu anoshanda, mamwe emapurojekiti akapa ...
Budgie Desktop: chinja kunaka kweUbuntu hwako
Kana iwe uchirangarira iyo SolusOS distro, chimwe cheicho chinokwezva chaive iyo Budgie Desktop nharaunda, ndiko kuti, iri ...
Apricity OS yakanaka uye yakapusa kugovera kweLinux
Apricity OS yakanaka, yakachena kugoverwa kweLinux iyo iwe yauri chokwadi kufarira. Kunyangwe iwo mufananidzo wepamusoro uri we ...
KDE Plasma 5.6 iri kunze
KDE Plasma ine vhezheni itsva, iri vhezheni 5.6, iyo yave kuwanikwa kurodha pasi. Nhasi tichaongorora kana isu tichinyatso ...
Kudzokorora kweYakanakisa Desktop Mamiriro ezvinhu a2015
Sarudza yako yaunofarira desktop nharaunda yekuparadzira kwako Linux. Isu tinoita ongororo yekuenzanisa yeakanakisa Linux desktops e2015.
Korora 22, iyo minty fedora yezvose zvinogoverwa
Korora kugoverwa kwevashandisi veavovice zvinoenderana naFedora. Kugoverwa uku kwakaburitsa Korora 22, vhezheni yakavakirwa paFedora 22 ine kugadzirisa.
Fluxbox, akareruka kwazvo windows maneja weedu Gnu / Linux
Fluxbox iri rakareruka hwindo maneja rakanakira michina ine mashoma zviwanikwa kana kugadzirisa yedu yekushandisa sisitimu nenzira yehupfumi.
KDE inogadzirira Fiber browser uye inounza nhau kuPlasma
KDE yakagara ichizivikanwa neyakaenderera mberi mitsva mukati meGNU / Linux masisitimu anoshanda, kambani iri mumakore apfuura iri ..
Chromixium: Unganidza zvakanakisa zveChannel OS uye Ubuntu
Chromixium kugoverwa kweLinux kunoenderana neUbuntu uye iyo inowana nhaka mabhenefiti ayo uye iyo inoshanda iyo ChromeOS uzivi. Yakanakisa ese maviri masystem anoshanda.
Plank idoko remahara iro rinogona kuiswa pane yako Linux distro kutevedzera nharaunda dzeMac OS X. Iye zvino ichaverengerwa munzvimbo dzeUbuntu 15.
Antergos ndomumwe wevanasikana veArchLinux iyo nguva pfupi yadarika ine vateveri vazhinji, pamwe iyo ArchLinux distro ichaitika zvakafanana neUbuntu neLinux Mint.
Maitiro ekuisa OpenSUSE 13.2 pakombuta yedu
Dzidziso diki yevatangi pane yekutanga kuisirwa OpenSUSE 13.2 pakombuta yedu. Kugovera kwacho kwakanakira vese vashandisi uye nyanzvi vashandisi.
KaOS yakanaka uye ine simba yekuparadzira Gnu / Linux
KaOS yakagovaniswa asi ine simba kugovera iyo inosanganisa yazvino kubva KDE nemamwe maturusi akadai sePacman package system kana OpenSUSE's gfxboot
Gnome 3.16 yave kuwanikwa
Gnome 3.16 yakatoburitswa, yazvino vhezheni yakagadzika yeakakurumbira uye anozivikanwa Gnu / Linux desktop iyo inosanganisa zvinopfuura 33.000 nharaunda shanduko.
Pepa: Chinyorwa Dhizaini inouya kuLinux
Zvigadzirwa Dhizaini, mutauro wakagadzirwa neGoogle kugadzira maseru mukati meiyo Android 5.0 Lollipop ikozvino inosvetukira kuLinux nePepa, chirongwa chinonakidza.
Maitiro ekuisa Whisker Menyu muXFCE (uye wedzera mashandiro kwairi)
Mushure mekuisa Whisker Menyu, ngatione maitiro ekuivhura uchishandisa Windows kiyi, uye maitiro ekuvhara iyo skrini uchishandisa mubatanidzwa Ctrl + Alt + L.
Zorin OS 9 kugoverwa kweLinux kwakagadzirirwa vashandisi vanobva kuWindows, zvakare kune Mac OS X. Nekuda kwekureruka kwayo uye yayo GUI yakafanana neiyi OS.
Tsananguro pfupi pane yemahara graphical nharaunda
Window maneja, desktop nharaunda, graphical server, ndedzimwe pfungwa dzatinofanira kubata nadzo zuva nezuva. Pano tinozvitsanangura
Maitiro ekuwedzera kunyorera kuGNOME kutanga
Kuburikidza neiyi yakapusa maitiro isu tichakwanisa kuwedzera kunyorera kuGNOME kutanga.
Dzidziso inotsanangura nenzira yakapusa maitiro ekunyora rekodhi yako kubva kuLinux neffmpeg uye nezvimwe zvishoma, pasina zvirongwa zvehunyanzvi zvekurekodha